प्रदेश सांसद भन्छन्- महामारीको बेला पनि सरकारले सम्झिएन – जुगल टाईम्स
प्रदेश सांसद भन्छन्- महामारीको बेला पनि सरकारले सम्झिएन
Posted on २२ बैशाख २०७७, सोमबार १५:२५ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
प्रदेश १ का सांसदहरुले सरकारले गर्ने काममा सांसदसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले महामारीको बेला सरकारले गर्ने गतिविधिमा सांसदहरुसँग सहकार्य नै नगरेको तथा सांसदहरुलाई भूमिका नै नदिइएको बताएका हुन् ।
संवाद समूह मोरङले गरेको भर्चुअल संवादमा तल्लो तहसम्म सरकारको गतिविधि देखिनको लागि सांसदहरुसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको बताएका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक परेको बेला स्वास्थ्य र सुरक्षा सामाग्री तत्काल उपलब्ध गाउन नसकेकोले स्वास्थ्य सामाग्री तुरुन्त जिल्लाहरुमा पुर्याउन उनीहरुको सुझाव छ ।
प्रदेश सांसद सक्रियता बढाउनको लागि सरकारको भूमिकामा भर पर्ने भएकोले सरकारले सांसदको भूमिका बढाउनु पर्ने नेकपा धनकुटाकी सांसद कुशुम श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
प्रदेश सांसदले सरकारले बेवास्ता गर्दा पनि सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा भने सहजीकरणको काम भने जारी रहेको झापाका सांसद झलकसिंह दर्लामीले बताउनुभयो । पालिकाहरुले डकुमेन्ट नभएका आधारमा कसरी राहत बाँड्ने भन्ने ’boutमा पनि सुरुका दिनमा निक्कै अप्ठेरो ब्यहोर्नुपरेको तर अहिले समस्या हल हुँदै जाने क्रममा रहेको सांसद दर्लामीले सुनाउनुभयो ।
लकडाउनको कारण बाहिर रहेका नागरिकलाई पालिकासँग समन्वय गरेर घर फर्किने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई सहज बनाएर विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंहले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आरडीटी परीक्षणलाई कम गरी पीसीआर परीक्षणलाई बढाउन सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो ।
राहत वितरणमा समेत सांसदहरुले असुन्तुष्टी जनाएका छन् । एक चरण पालिकाले राहत वितरण गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम कम भएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले जनसुरक्षा कोषमा रहेको रकमबाट गाउँपालिकालाई ५ लाख, नगरपालिकालाई १० लाख, उपमहानगरलाई १५ र महानगरलाई २० लाखको दरले रकम पठाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि ५ लाख पठाएको छ । समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद जयराम यादवले नागरिकता नभएकालाई राहत नदिँदा भाडामा बसेका अतिविपन्न भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोना सङ्क्रमित सामान्य बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालबाट नै उपचारको व्यवस्थापन मिलाएर गम्भीर प्रकृतिका बिरामी मात्र कोभिड उपचार केन्द्रमा लग्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश सांसद तथा सामाजिक विकास समिति सभापति सरीता थापाले महामारीको बेला एउटा समितिले मात्र अनुगमन गरेर समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो । सरकारसँगै हरेक सांसद आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय भएको बेला समितिका सदस्यहरु पनि आफ्नै जिल्लामा सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ ।
तर सरकारले गरेको कामको बारमा भने थापाले सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामाग्री पुगेको जानकारी आएको बताउनुभयो ।
विप्लवका भतिजा प्रहरीको नियन्त्रणमा
Posted on ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १९:५९ Author जुगल टाईम्स
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का भतिजा दिलीप चन्दलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालतबाट थुनामुक्त दिलीपलाई प्रहरीले आज पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो। बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा […]
पूर्वप्रधानमन्त्रीको अन्तरवार्ताले रेडियो नेपालमा हंगामा, कार्यकारीले क्षमा माग्दै हटाए डा. भट्टराइको रेकर्ड
Posted on १५ बैशाख २०७७, सोमबार १९:०९ Author जुगल टाईम्स
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तरवार्ताले सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपालमा आतंक मच्चाएको छ । सोमबार बिहान साढे ६ बजे प्रत्यक्ष प्रशारण भएको अन्तरसंवादमा डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेपछि रेडियोमा हंगामा मच्चिएको हो । सरकारी स्वामित्वको सञ्चारमाध्यममा आएका अतिथीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको भन्दै सरकारका विभिन्न निकाय तथा अन्य सरकारी सञ्चारमाध्यमका कर्मचारीले आलोचना गरेका थिए […]
Posted on २५ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:१६ Author प्रदेश न 1
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारीको बैठक आज बिहान १० बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बस्दैछ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि मुलुकभर लकडाउन लागू भएपछि काँग्रेस पदाधिकारी बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको हो । बैठकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा सरकारका तर्फबाट भएका काम–कारवाही र पार्टीका तर्फबाट गर्न […]
मोरङका ८ जनामा दादुरा संक्रमण
खाद्यान्न रित्तिएपछि आमाले छोराछोरीलाई भुल्याउन पकाइन ढुंगा